Xukuumada Cusub ee raiisul wasaare Saacid Oo Maanta la dhaariyay. – SBC
Xukuumada Cusub ee raiisul wasaare Saacid Oo Maanta la dhaariyay.
Posted by Webmaster on November 15, 2012 Comments
Gudoomiyaha Maxkamada sare Soomaaliya Caydiid Ilka xanaf ayaa maanta ku hordhaariyay Baarlamanka Soomaaliya 9 wasiir oo ka tirsan Xukuumada cusub ee Soomaaliya .
Kulankii caadiga ahaa ee ay Baarlamanka Soomaaliya isugu imanayeen howlahooda shaqo ayaa maanta la horkeenay Wasiirada cusub ee ay maalin ka hor siiyeen kalsoonida waxaana halkaasi goob joog ahaa raiisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon.
Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya ayaa u sheegay xildhibaanada in loo guda galayo dhaarinta sagaal xubnood oo ka tirsan wasiirada xukuumada Soomaaliya taas oo uu ku hordhaariyay Baarlamanka Gudoomiyaha Maxkamada sare.
Raiisul wasaaraha Soomaaliya C/faarax shirdoon ayaa halkaasi ka hadlay isagoona sheegay in uu ku faraxsanyahay qaababka ay ula shaqeeyeen golaha Baarlamanka Soomaaliya xubnahan cusub ee uu soo magacaabay maantana la dhaariyay uu ka filayo in ay ka soo dhalaalaan shaqooyinka loo igmay.
Ka dib waxaa halkaasi hadalo guubaabo ah ka soo jeediyay gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari isagoona sheegay in golahan cusub ee la dhaariyay loogaga fadhiyo in ay ka gun gaaraan shaqooyinka loo magacaabay.
Waxaa ka maqan Golaha Maanta la dhaariyay Wasiirada wasaarada Arimaha Dibadda Soomaaluta Marwo Fowsiya Yuusuf oo la sheegay in ay ku maqantahay Dhanka dalka Jabuuri halkaas oo ay Soomaaliya uga qeyb galeyso kulan caalami ah.